कसरी गर्ने कलेजोसम्वन्धि रोगको निदान तथा व्यवस्थापन ? | Nepali Health
२०७२ चैत ३० गते ११:५३ मा प्रकाशित
डा. खगेन्द्र ब. बम, आयुर्वेद चिकित्सक
कलेजो (Liver) सम्बन्धी कुनै पनि समस्या आइपरेमा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा विश्वास गरेर उपचारार्थ आउने विरामीको संख्या संख्या उल्लेख्य छ । तसर्थ कलेजो सम्बन्धी रोगहरु र आयुर्वेद एक अर्काको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
आयुर्वेदका प्राचिन ग्रन्थहरु चरक, सुश्रुत, संहिताहरुमा कलेजोको संरचना एवं सो अंगमा लाग्ने रोगहरु, निदान प्रकृया एवं उपचारको विशद ढंगबाट व्याख्या र विवेचना भएको पाइन्छ ।
संसारकै सबैभन्दा पुरानो र नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्दतिको रुपमा रहिआएको आयुर्वेद विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै हालको अवस्थासम्म आइपुगेको छ र हालको सन्दर्भमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिलाई अझ वैज्ञानिक, प्रामाणिक र युक्तिसंगत बनाउनु परेको छ ।
आजको एक्काइसौं शताब्दी भनेको तथ्यहरु लाई आधारमा आफूलाई स्थापित गर्ने युग हो । आयुर्वेद चिकित्सापद्दतिलाई समयानुकूल युक्तिसंगत प्रमाणयुक्त चिकित्सा (Evidence-based Medicine) बनाउनलाई आधुनिक नैदानिक उपकरणहरु (Modern Diagnostic Tools) को आधारमा औचित्य सावित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको आयुर्वेदको Referral Centre को रुपमा रहेको नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा आउने कलेजोको रोगीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । कलेजोसम्बन्धी सामान्य रोग हेपाटाइटिस ‘ए’ देखि लिएर लिभर सिरोसिस, कलेजोको क्यान्सरका विरामीहरु उपचारको लागि आउने गरेका छन् ।
“जन्डिस” आफैमा रोग नभएर विभिन्न रोगहरुको एउटा लक्षण हो र त्यसमध्ये हेपाटोसेलुलर, हेमोलाइटिक र अब्स्ट्रक्टिभ तीन वटैको Clinical feature लिएर रोगीहरु आउने गरेका छन् । त्यसैले यी विविध रोगहरु एवं लक्षण समूहलाई समयमा चिन्न सकेर सोही अनुरुपको उपचार एवं व्यवस्थापन तर्फ लाग्नु आवश्यक छ । यस लेखमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा आउने हेपाटाइटिसहरुबारे सामान्य जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
हेपाटाइटिस ‘ए’ : Faecoral Route बाट सर्ने गर्छ र बढीजसो बच्चाबच्ची यसबाट संक्रमित हुन्छन् । यसमा कलेजोले मेटाबोलिजम काम गर्न सक्दैन किनभने Liver Sluggish हुन्छ । यसमा भूई अमला, गुडुची, पुनर्नवा आदि मिश्रित औषधीले कलेजोमा रहेका UDP-Glucuronosyl Transferase को प्रभावकारीतालाई बढाउने काम गर्दछ र Jaundice मा हुने अत्यधिक Bilirubin लाई घटाउन सहयोग पु¥याउँछन् ।
त्यसैले हेपाटाइटिस ‘ए’ मा गरिने आयुर्वेदिक उपचार वैज्ञानिक, युक्तिसंगत तथा प्रभाकारी छ । हेपाटाइटिस ‘ए’का लक्षणहरु – भोक नलाग्ने, उल्टी आउन खोज्ने वा आउने, पिसाब गाढा पहेँलो हुने, थकाई लाग्ने आदि जस्तै ।
हेपाटाइटिस ‘बी’ : शरीरको तरल पदार्थ खासगरी Blood Products, Semen, Sweat आदिबाट सर्ने गर्छ । यसमा ५–१०% व्यक्तिहरुमा लामो समयसम्म (६ महिनाभन्दा बढी) HBSAg रहने हुन्छ र जसलाई Carrier State भनिन्छ ।
विदेश जाने क्रममा रगतको जाँच गर्दा Incidental finding को रुपमा यो समस्या देखिन्छन् र आत्तिएर ती व्यक्तिहरु उपचारको क्रममा आउने गर्दछन् । तर ती व्यक्तिहरुमा तीव्र संक्रमण(Acute Infection) को लक्षण देखिँदैनन् ।
हेपाटाइटिस बी संक्रमितहरुमा लिभरबाहेकका (Extra Hepatic Features) जस्तै जोर्नी दुख्ने, डावरहरु आउने लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन् । हेपाटाइटिस बी भाइसरलाई मार्ने क्षमता भएका जडिबुटीहरु अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेका छन्, जुन Antiviral Drugs- Interferon, Lamivudine तथा Ribavirin भन्दा निकै सुलभ र सस्तो रुपमा उपलब्ध छन् ।
हेपाटाइटिस सी : यसको सर्ने माध्यम पनि हेपाटाइटिस बी जस्तो नै हो । शुरुवातमा सामान्य जन्डिसमा देखिने लक्षणहरु हुन सक्छन् र लक्षणहरु नदेखिने पनि हुन सक्छन् । ८५% Chronic Infection को रुपमा विकसित हुन सक्छन् र २०–३०% व्यक्तिमा लामो समयपछि Cirrhosis (लिभर कडा हुँदै जाने ), डल्लो हुने तथा आकारमा खुम्चिेने, लिभर कोषहरु मर्दै जाने समस्या हुन सक्छ । यसमा पनि आयुर्वेदीक औषधीहरु प्रभावकारी छन् ।
हेपाटाइटिस ई : यो पनि हेपाटाइटिस ए जस्तै गरि सर्ने Viral Hepatitis हो र लक्षणहरु पनि हेपाटाइटिस ए देखिए जस्तै हुने गर्छन । काठमाडौंमा यो समस्या व्यापक रुपमा देखिने गरेको छ । गर्भवती महिलाहरुमा यो भएमा घातक हुन सक्दछ । यो निको हुने हेपाटाइटिस ए भन्दा लामो समय लाग्ने हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका भाइरल हेपाटाइटिस बाहेक लिभर सिरोसिस, अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, Obstructive Jaundice, लिभर क्यान्सर आदि समस्या लिएर पनि नरदेवी अस्पतालमा विरामीहरु आउने गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला लिभर सम्बन्धी समस्या लिएर आएपछि गर्नुपर्ने निम्न लिखित परीक्षणको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक छ ।
१. Complete Blood Count (CBC) to screen for haemolysis.
२. Liver Function Test :
Alanine Aminotransferase (ALT) & Aspartate Aminotransferase (AST) यी दुबैले लिभर कोषको कति मात्रामा क्षति भैरहेको छ भन्ने जनाउँछ ।
c. Alkaline Phosphatase यसले पित्तको प्रवाहमा अवरोध छ कि छैन भन्ने छुट्याउन ठूलो मद्दत गर्दछ ।
d. Albumin / Prothrombin Time (PT) यीनीहरुले लिभरको सिर्जनात्मक काम बारे जान्न सहयोग पु¥याउछन् ।
यिनका अतिरिक्त Anti body Hepatitis C Virus (Anti-HCV), Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), Hepatitis Be Antgen (HBeAg) / PCR (Polymerase Chain Reaction – DNA Diagnosis) हो जुन Hepatits B को उपचार प्रकृयालाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । यिनका अतिरिक्त केही Radiological Imaging पनि आवश्यक पर्दछन् :
१. अल्ट्रासाउण्ड : यसबाट लिभरको आकार, संरचना एवं पित्तथैली, Common Bileduct को Size आदि बारे थाहा पाउन सकिन्छ, जसबाट अवरोधजन्य हो कि होइन भनेर छुट्याउन सकिन्छ । यो निकै सुरक्षित र सुलभ, भरपर्दो Imaging Modality हो ।
२. सिटीस्क्यान : यसबाट लिभर, प्याङ्क्रियाज तथा वरपरको ठाउँमा कुनै Mass को Growth छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ र त्यस्तो प्रकारको Lesion Malignant हो कि होइन भनेर Rule Out गर्न सकिन्छ ।
३. ERCP : यसले कलेजो तथा पित्तथैली, पित्तनलीको आसपासमा रहेका अवरोधक बारेमा प्रष्ट पार्छ । यसको उपयोग दुई प्रकारले हुन्छ – नैदानिक तथा उपचारात्मक ।
४. Liver Biopsy : कलेजोबाट सानो टुक्रा निकालेर लिभर बायोप्सी गरेर Benign हो कि Malignantहो भनेर छुट्याउन सकिन्छ ।
उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको सहायता लिई आयुर्वेदीक औषधीको उचित मात्रामा प्रयोग गरी कलेजो र यस सम्बन्धित रोगहरुमा आफूलाई स्थापित गर्नु चुनौती एवं अवसरको रुपमा रहेको छ । यसतर्फ आयुर्वेदसंग सरोकारवाला सम्बद्ध व्यक्तिहरुले अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
#डा.बम नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा कार्यरत छन् ।
नर्सिङ उप-प्राध्यापक, प्रशिक्षक, ल्याब ब्वाईगरी ३५ जनालाई स्थायी जागिर